Nagarik Shukrabar - हस्तमैथुनसम्बन्धी भ्रम हटाएको राम्रो
हस्तमैथुनसम्बन्धी भ्रम हटाएको राम्रो
बुधबार, २७ पुष २०७३, १० : २० | डा. रवि शाक्य , Kathmandu
मेरो एकजना ३२ वर्षको साथी छ । ऊ परम्परागत सोचमा असाध्यै विश्वास गर्ने खालको छ । विवाह गरेको केही समयपछि ऊ रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गयो । विदेशमा बस्दा उसको स्वप्नदोष भएछ । केही दिन बिराएर स्वप्नदोष हुने गर्दो रहेछ । स्वप्नदोष हुँदा वीर्य स्खलन भएर आफ्नो शक्ति खेर गएको भन्दै ऊ बेलाबेलामा साथीहरूसँग चिन्ता व्यक्त गर्ने गथ्र्यो । ऊ आफूलाई जोश–जाँगर केही पनि नचल्ने तथा गाह«ो हुने गरेको बताउँथ्यो । स्वप्नदोषलाई लिएर सधैँ पिर मात्रै गरिरहेको हुन्थ्यो । उसले केही सेक्सोलोजिस्टसँग पनि परामर्श ग¥यो । उसलाई अहिले सेक्समा कुनै रुचि नै नहुने समस्या देखिएको छ । उसले भोगिरहेको समस्याको कुनै उपचार होला कि नहोला ?
पूर्वीय दर्शनमा वीर्यको तुलना रगतसँग गरिन्छ । एक सय थोपा रगत बराबर एक थोपा वीर्य हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यसले गर्दा पनि स्वप्नदोष हुँदा या हस्तमैथुन गर्नेहरूले आफूलाई कमजोर भएको ठान्छन् । यौन चाहना पूरा गर्न गरिने हस्तमैथुनले जो कोहीलाई पनि स्वस्थ र फुर्तिलो बनाउँछ । पछिल्लो समयमा विश्वमा चिकित्सकहरूले हस्तमैथुन गर्न हौसाइरहेका छन् । बढ्दो एचआईभी संक्रमण, यौन रोग, बलात्कार घटाउन युवाहरूलाई हस्तमैथुन गर्न प्रेरित गरिएको छ ।
वीर्य स्खलन हुँदा कमजोर हुन्छु भन्नु थुक्दा मुख सुक्यो भन्नुजस्तै हो । पिच्च–पिच्च थुकिरहे पनि मुख सुख्खा हुने गरी कहिल्यै सुक्दैन । वीर्य स्खलन भएर सकिने चिज पनि होइन । अण्डकोष स्वस्थ रहुञ्जेल वीर्यको निर्माण प्रक्रिया एकदम तीव्र गतिमा हुन्छ । अण्डकोष निश्चित भाग जसमा वीर्य बस्ने गर्छ त्यो भाग भरिएपछि यो बाहिर निस्कन्छ । यौन सम्पर्क नगरेको लामो समय भयो वा हस्तमैथुन पनि गरेको छैन भने अण्डकोषमा जम्मा भएको वीर्य स्वप्नदोषमार्फत स्खलित हुन्छ । यो एकदमै सामान्य प्रक्रिया हो । वीर्य पतनबाट कुनै पनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक हानि हुन्छ भन्नु भोक लागेको मानिसलाई खाना खाएर वा निद्रा लागेको मानिसलाई सुतेर हानि हुन्छ भन्नुजस्तै हो ।